Phyu Phyu Thin Sympathizer: 09/01/2010 - 10/01/2010
0 comments at 5:36 PM Labels: phyu phyu thin's writing
ဖြူဖြူသင်း Saturday, September 11, 2010
ကျမက ငယ်ကတည်းကပဲ လူမှုရေး ဝါသနာ ပါတယ်လို့ ကျမ မိဘများနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျမလည်း မှတ်သားမိရ သလောက်တော့ ဘုရားပွဲဈေးတွေ သွားရင် တခါမှ မုန့်မစားရတာ ပါဘဲ။ ပွဲဈေးက တောင်းစားတဲ့ သူတွေကို ပေးတာနဲ့ ပါလာတဲ့ မုန့်ဖိုး ကုန်သွားလို့ပါ။ နောက် ကျောင်းစာသင်တော့မှ နိုက်တင်ဂေးလ်၊ ဟင်နရီဒူးနန့် အစရှိတဲ့ နာမည် တွေနဲ့ ရင်းနှီးလာရပါတော့တယ်။ အဲဒီကတည်းက သူတို့ကို အထင်ကြီး လေးစားစိတ်တွေ ကိန်းဝပ်လာနေခဲ့တယ် ထင်ပါ တယ်။
ကျမတို့ဟာ ဘုရား ကျောင်းကန်နဲ့ ပတ်သက်တာကလွဲလို့ တခြားသော အလှူ အတန်းတွေ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်း တွေ လုပ်တာ အတော်လေး နည်းပါတယ်။ လူအများကြီးကို ထမင်းကျွေးတဲ့ အလှူမျိုးတွေကိုလည်း မကြာခဏ လုပ်ကြပါတယ်။ ကျမ ငယ်ငယ်က အဲဒီ အလှူမျိုးကို ဝေဖန် ပြောဆိုရင် လူကြီးတွေက ကျမကို ဒိဋ္ဌိလို့ မှတ်ချက်ချဖူးတာလည်း မှတ်မိနေပါ သေးတယ်။
ကျမ လူမှုရေး လုပ်တာ ဝါသနာပါတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း အတိုင်းအတာ ကန့်သတ်ချက် ရှိပါတယ်။ ငွေကြေး သိပ် မတတ် နိုင်တာကလည်း တကြောင်း ပါပါတယ်။ တောင်းတဲ့ လူတွေကို ပေးတယ်၊ ဒုက္ခရောက်တဲ့ လူကို ကူတယ် ဆိုတာတွေက လည်း ဘုရားဟောတဲ့ အလှူဒါန ဆိုတာထက် ကျမ စိတ်မှာ မနေတတ်လို့ ဆိုတဲ့ စိတ် တခုတည်းနဲ့ ပေးတာမျိုးပါ။
နောက်တခု ဝန်ခံစရာ ရှိတာက ခုခံအား ကျဆင်းမှုရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဒီနေ့ ဒီအချိန်အထိ ဘယ်အခြေ အနေမျိုး ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်နေတယ် ဆိုတာကလည်း ကျမ အစွမ်းအစ ဆိုတာထက် ကျမတို့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမြော်အမြင် ကြီးမားမှုကြောင့် ပါပဲ။ ကျမတို့ ခေါင်းဆောင်ဟာ ကျမတို့ကို ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ သင်တန်းတွေ တက်ခိုင်းပြီး ဒီအလုပ်တွေ လုပ်ခိုင်းထားပေမယ့် ကျမတို့ကို တာဝန် ပေးလိုက်ကတည်းက သူ့နိုင်ငံရေး တာဝန်တွေနဲ့ အကျယ်ချုပ် ကျခံရတာနဲ့မို့ ကျမတို့ တွေ့ဆုံပြီး အခက်အခဲတွေ အကြောင်းကို တခါမှ မဆွေးနွေး၊ မတင်ပြခဲ့ရ တာလည်း ထူးခြားချက် တခုပါပဲ။
ဒီအခက်ခဲတွေကို ခေါင်းဆောင်ကြောင့် ကျော်လွှားနေတယ် ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲလို့ မေးရင် ကျမတို့ ခေါင်းဆောင် ဟာ ကျမတို့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွန်းအားတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပေးနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကျမ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်တော့ ထွက်ပြေးလိုစိတ်တွေ မကြာခဏ ဆိုသလို ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကျမ မြင်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ခွန်အားတွေ အလိုလို ပြန်ဖြစ်လာရပါတယ်။
ကျမတို့ ဒီလုပ်ငန်း စတင် လုပ်ကိုင်စဉ် ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်က မြန်မာပြည်မှာ NGO ဆိုတာတွေ ရှိတော့ ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ပြည် တွင်းကနေပြီးတော့ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်သူ နည်းပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း များပါတယ်။ လုပ်ကိုင်နေရင်းကမှ ကိုကျော်သူ ဦးဆောင်တဲ့ နာရေး ကူညီမှုအသင်းဟာ လူပေါင်း မြောက်များစွာ အားကိုးရာ ဖြစ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခုဆိုတာ သိလာရပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ သူ့ကို အရမ်း အားကျပါတယ်။ ဒီနေ့ ထက်ထိ ကိုကျော်သူကို အဝေးကပဲ မြင်ဖူးပါတယ်။ သူက လူမှုရေး သက် သက် အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရေး လုံးဝ မဆက်နွှယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ ဆက်နွှယ်ရင်တော့ အခက်အခဲတွေကို ဒီထက် ပိုပြီး ရင်ဆိုင် ရဖွယ် ရှိပါတယ်။
ကိုကျော်သူ လုပ်ပြလိုက်တာဟာ ကျမတို့ မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် တကယ့် စံပြပါပဲ။ သူဟာ အောင်မြင် ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသား၊ သရုပ်ဆောင် တယောက်။ သူ ဒီအလုပ် စလုပ်စဉ်က မလိုသူတွေ ပြောစကားအတိုင်း ပြောရရင် သုဘရာဇာ အလုပ်ကို ထလုပ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဗမာ ပြည်မှာ စကားပုံ တခုလို ဖြစ်နေတဲ့ စကားတခွန်း ပေါ်နေပါတယ်။ “သေရင် မပူနဲ့ ကျော်သူ ရှိတယ်” ဆိုတာပါပဲ။ သူ့ အနစ်နာခံမှု၊ လူသား အကျိုးပြု လုပ်ငန်းဟာ ဘယ်လောက် ထိရောက် သလဲ ဆိုတာ အဲဒီ စကားရပ်ကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။
နောက်ထပ် တယောက်က ကျမတို့ ကိုဇာဂနာကြီးပါပဲ။ ကျမက သူ့ကို ရင်းနှီးသော အားဖြင့် ကိုသူရ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်တာတွေကို တခါတခါ ပြန်ပြောပြမှ သိရတာပါ။ ကလေးတွေ ကျောင်းထားပေးတာ၊ အနာကြီးရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပါဝင် ဆောင်ရွက်တာ စသဖြင့် အများကြီးပါ။ သူလုပ်နိုင်သမျှတွေဟာ တော်ရုံလူ လုပ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
အထင်ရှားဆုံးကတော့ နာဂစ် ဖြစ်ချိန်မှာ သူ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ် NGO မှ လိုက်မမီနိုင်အောင် လုပ်ပြသွားတာသက်သေ ပါပဲ။ ဘယ်လောက် အထိတောင် လုပ်နိုင်သလဲ ဆိုရင်တော့ ထောင် ၅၉ နှစ် ကျတဲ့ အထိအောင်ကို လုပ်ပြသွားတာပါ။
နောက်တယောက်ကျတော့ ကျမ အရမ်း ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမနဲ့ အစပိုင်းက မရင်းနှီး ပါဘူး။ သူက နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမ၊ ကျမက သူ့ပရိသတ် တယောက်ဆိုတော့ မရင်းနှီးတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ လုပ်တာတွေ ကြားပါတယ်။ ကိုကျော်သူတို့ နာရေး ကူညီမှု အသင်းမှာ ဦးဆောင်သူ တယောက် အနေနဲ့ ပါနေတာ၊ ကိုသူရနဲ့ တွဲပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ လူမှုရေးတွေကို တက်တက် ကြွကြွ လုပ်နေတာတွေ ကြားပါတယ်။
AIDS ဖြစ်နေတဲ့ မိဘမဲ့ ကလေး တယောက်ကို သူတို့ရဲ့ သုခရိပ်မြုံ ဆိုတဲ့ ကလေးဂေဟာကို သွားအပ်တော့မှ သူနဲ့ စတွေ့ပြီး လူချင်း ရင်းနှီးရတာပါ။ သူ့ကို မြင်မြင်ချင်း ကျမ စိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းမှုကို ခံစားရပါတယ်။ တကယ့် အစ်မ တယောက်လိုပဲ ခံစား ရပါတယ်။ သူတို့ ဂေဟာမှာ ကလေး သိပ်မရှိသေးပါဘူး။ နေရာကလည်း မြောက်ဒဂုံဘက်လည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ သန်လျင်မှာပဲ ယာယီ ရှိနေပါသေးတယ်။
သူ့ကို ကလေးတွေက အမေကြီး လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက သူ့ကို ချစ်လိုက်တာ၊ တကယ့် အမေရင်း အတိုင်းပါပဲ။ သူကလည်း စိတ်ရှည် လက်ရှည် ကလေးတွေကို စကားတွေပြော၊ မုန့်တွေကျွေး လုပ်နေတာ ကြည့်ရင်း ကျမ ကြည်နူးမိပါ တယ်။
သူတို့ အကြောင်းကို ဘာကြောင့် ပြောနေသလဲ ဆိုတာ အရှင်းဆုံး ပြောရရင်တော့ သူတို့ကို လေးစား အားကျ လို့ပါ။ ကျမ တို့ ပြည်သူတွေက သူတို့လို တိုင်းပြည်မှာ ထင်ရှားသူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ဘာ လုပ်သင့်တယ်၊ ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာတွေကို အလိုလို သိသွားတာပါပဲ။
အခုဆိုရင် ငွေကြေး ရလို့ ဖြစ်စေ၊ မရဘဲ ဖြစ်စေ တဦးချင်း၊ တဖွဲ့ချင်း ကနေ အစုလိုက် ရပ်ရွာလိုက် လုပ်နေကြတဲ့ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေ အများကြီး ပေါ်လာပါပြီ။ သံဃာတွေကလည်း ကျမတို့ ငယ်စဉ်က တရား ဟောသလို အလှူပေး သူဌေးဖြစ် ဆိုတာထက် လူမှုရေးတွေ လုပ်သင့်တယ်၊ တိုင်းပြည် လိုအပ်ချက်က ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ်၊ ဘာတွေ လုပ်သင့်တယ်၊ ဘယ် လို စိတ်မျိုး ထားရမယ် ဆိုတာတွေကို များများ ဟောပြောလာပါပြီ။
တိုင်းပြည် အုပ်စိုးသူတို့ ပစ်ပယ်ထားတဲ့ လစ်ဟာချက်တွေကို တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်သူတွေ ရှိလာပါပြီ။ အားရစရာ ကောင်းလှတဲ့ အတိုင်းအတာ တခုအထိတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ ပွင့်လင်း လွတ်လပ်မှုတွေ ရှိလာရင် ပိုမို လုပ်ကိုင် ဆောင် ရွက်လာနိုင်မှာပါ။ သေးငယ်တဲ့ လူမှုရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်စေ၊ တဦးချင်း ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက် ဖြစ်စေ လူမှု လိုအပ်ချက် လုပ်ကိုင် နေသူတွေဟာ လေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်။
သေချာတာကတော့ အထက်က ပြောတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေ၊ ကိုကျော်သူ၊ ကိုဇာဂနာ၊ မသန်းမြင့်အောင် တို့လို ကျမ လေး စား အားကျရသူတွေရဲ့ ဦးဆောင် လမ်းပြမှုတွေ မရှိရင် ကျမ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေ ဒီအခြေအနေထိ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာပါပဲ။
1 comments at 5:33 PM Labels: phyu phyu thin's writing in Eng
Some people have asked me what kinds of difficulty I have encountered while working on the prevention and eradication of HIV/AIDS. I said every job I do is full of hardships.
I andafew young people helping me have been thinking about HIV/AIDS awareness programs and how to approach HIV-infected people in order to provide them with medicine and proper treatment, and to reintegrate them into the society so they can continue their social lives. You can imagine how much trouble we will have to shoulder in implementing our work.
The most essential thing that we always have to talk about is financial problems. The less funding we receive, the more difficult it is to carry out our programs. Some of my friends have lent some assistance to us. I now rentaplace from the local municipality in New Dagon Township where I am runningarehabilitation program for HIV patients. It includes vocational training such as spangling and sewing. Recently, I could openanan-bread shop for four patients with contributions fromadonor. One of the difficulties I have faced is that I still cannot work for many patients.
Amid these hardships, I have met with some people who still cannot change their behavior. Perhaps this is the most difficult thing to alter.
I also have experience with other young people who have gone back to their old ways—being naughty and drinking—after being infected with HIV. Treating such careless patients costs us more money and makes us more physically and mentally exhausted. However, this is not so bad. I have faced worse situations.
Most of my patients are not from urban areas. They don't have much knowledge about HIV/AIDS. They are farmers, drivers, truck attendants and others. Among them, there were five girls who were sex workers. They came from different backgrounds, but they use their bodies in the same way.
In my opinion, one of the girls is someone who cannot stand to be withoutaman. She made money and spent it with other men she liked. She earned money by using her body and used it again when she looked for happiness with other men. I don't even want to think about how much she has distributed HIV to others. Whenever I hadachance, I brought her home and tried to help her change her ways, but she always ran away and went back to her original life, living on the street.
Another girl isasinger fromarestaurant. She has another story. She always told me that she only sang songs. But one day she made an unexpected visit to my house when I was away. The reason she came to my house was to tell my family that she would move to Sittwe forabetter job since she could not survive in Rangoon. She also said that she had unprotected sex withaman who used to take care of her just to give him the disease, because he did not support her anymore. My family became furious.
My family treats HIV patients as if they were our close relatives. Almost every patient has eaten at my house. Perhaps the girl's familiarity with my family made her speak out very openly. Nevertheless, the act of deliberately spreading the disease is not somethingahuman being should do.
Another girl works atamassage place. She is very beautiful. Her skin is so smooth that you would never think that she has been infected with HIV. She said she did not mean to do it, but for her future she had to approacharich man who visited her place. That man took her toakaraoke room and they had sex withoutacondom. Even though she said she did not intend to do it, I think she should have prevented herself from spreading the disease. I came to know about it just because she told me.
Whenever I think about how many similar incidents like this have already taken place, I cannot sleep anymore. Sometimes I suddenly wake up at night, fearing the consequences of the spread.
I really am not very happy when I think about this. And I am very concerned about how to change the bad behavior and attitude of some HIV patients who I have come across.
Phyu Phyu Thin has cared for HIV and AIDS patients since 2002, providing counseling and education, sending them to clinics and providing accommodation in Rangoon to those coming for treatment from outlying areas.
0 comments at 5:31 PM Labels: phyu phyu thin's writing in Eng